Nubia Play 5G ayaa lagu dhawaaqay: Qadka dhexe ee cusub oo leh shaashadda 144 Hz | Androidsis
Nubia Play 5G ayaa lagu dhawaaqay: Qadka dhexe ee cusub oo leh shaashadda 144 Hz
Nubia ayaa go'aansaday inuu sii wado sharadka faahfaahinta kala duwan ee Red Magic 5G ee Daahfurka 5G, taleefan casri ah oo lagu xisaabtamo. Si tan loo sameeyo, waxay qaadaysaa dariiqa loo sameeyo terminal aalado ay ku jihaysan yihiin sarkaalka dhexdhexaadka ah iyo dib u xoojinta shaashadda oo ah sheegasho weyn
Laga soo bilaabo taleefankan waan ognahay qeexitaanno kala duwan, sawirkaaga iyo sanduuqa wax soo saarka, yaa lagu iibin doonaa laba maalmood oo kaliya Shiinaha. Ku Nubia Ciyaar 5G waxay noqotaa ikhtiyaar muhiim ah iyo waxa dhacaya kadib aqbalaadda weyn ee tusaalaha Nubia Z20.
1 Nubia Play 5G, dhammaan qeexitaankiisa
Nubia Play 5G, dhammaan qeexitaankiisa
Nubia Play 5G waxay ku fiicantahay heerka cusbooneysiinta 144Hz, tan wuxuu ku darayaa saamiga tijaabada ee 240 Hz shaashadda 6,65-inch ee AMOLED oo leh xallinta Full HD +. Dareeraha sawir-qaadaha (selfie sensor) wuxuu ku yimaadaa qaybta kore, taas oo u oggolaan doonta adeegsiga buuxa ee dusha oo dhan waqtiga isticmaalka.
Waxaan ku wajaheynaa qalab si xarrago leh u qurux badan oo bannaanka ah, guddigan Waxaa weheliya 6/8 GB oo ah LPDDR4x RAM, 128/256 GB ee UFS 2.1 keydinta gudaha. Labadan qaybood ayaa processor-ka lagu daray Snapdragon 765G Qualcomm, kaas oo isku daraya GPU Adreno 620 fitamiin ah 20% marka loo eego qaabka 765. Waxay ku darsataa 5G hoosta shabakadaha NSA iyo 5G SA.
Kaamirada ugu weyn waa 582 megapixel Sony IMX48 oo leh aperture f / 1.75, xagal balaaran oo dhan 120º oo ah 8 megapixels, kaamiro yar yar oo 2 megapixels ah, dareeraha qoto dheer ee 2 megapixels iyo kamarada iswada ah waa 12 megapixels. Akhristaha faraha ayaa ka hooseeya shaashadda, tan waxaa lagu daray isku xirnaanta 5G, Dual Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC iyo nooca USB C.
Nubia Ciyaar 5G
MUUQAAL 6.65-inch AMOLED leh FullHD + xallinta (2.340 x 1.080 pixels) - heerka cusbooneysiinta: 144 Hz - heerka tusaalaha: 240 Hz
PRORESOR Octa-core Snapdragon 765G (8-core Kryo 475 at 2.4GHz)
GOOBKA BADBAADADA GUDAHA 128 / 256 GB UFS 2.1
CHAMBERS 582 MP Sony IMX48 sensor weyn - kan labaadna waa 8 MP xagal ballaadhan - kan saddexaadna waa 2 MP makro camera kan afraadna waa 2 MP aaladda qoto dheer - Xagga hore: 12 MP
BATARY 5.100 mAh oo leh Lacag Deg Deg ah 4.0
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 10 oo leh NubiaUI 8.0
Isku xirnaanta 5G NSA iyo SA - 4G - Dual SIM - NFC -USB nooca C - Bluetooth 5.0 - Dual WiFi
MUUQAALO KALE Sawirka faraha ee shaashadda hoostiisa - Kordhin ku samee qaabka iyo dareeraha qaboojinta
Qiyaasaha iyo Miisaanka 171.7 x 78.5 x 9.1 mm - 210 garaam
El Nubia Play 5G ayaa imaan doonta Abriil 24 ilaa Shiinaha oo leh barnaamijka Android 10 oo leh lakabka NubiaUI 8.0 oo leh laba midab oo kala duwan: Madow iyo Buluug. Nooca ah 6/128 GB waa qiimahiisu yahay 2.399 yuan (312 euro) iyo qaabka ugu sareeya oo leh 8/256 GB wuxuu u dhigmaa 2.699 yuan (351 euro at heerka sarifka). Waqtigan xaadirka ah ma aysan shaacin helitaanka adduunka oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Nubia Play 5G ayaa lagu dhawaaqay: Qadka dhexe ee cusub oo leh shaashadda 144 Hz
Oppo A72: Qalab cusub oo leh 6,5 "guddi, Snapdragon 665 iyo ColorOS 7
App-ka cusub ee 'My Nintendo' wuxuu ka bilaabmayaa Japan: iibso ciyaaro, daawashada durdurrada iyo waqtiga ciyaartaada